သင်၏ဆံပင်ပုံစံကိုသင်မည်သို့ဖော်ပြသနည်း။ ဆံပင်ညှပ်စကားပြောနည်း - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ဂျိမ်းအဒမ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် နိုဝင်ဘာလ 21, 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 6
အကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မုတ်ဆိတ်မွေးခြင်းအတွက်သင်၏ဆံပင်ကိုစကားပြောရန်ထိပ်ဆုံးနည်းလမ်း ၁၀ ခု!
သင်သည်ဆံပင်ညှပ်ကုလားထိုင်တွင်ထိုင်။ မည်သည့်ဆံပင်ပုံစံကိုလိုချင်ကြောင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်စကားဖြင့်ရှင်းပြရန်ကြိုးစားပါ။ သင်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၊ ရိုးရှင်းသောမျက်နှာတစ်ခုသို့မဟုတ်မျက်နှာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသလားသို့မဟုတ် Tom Cruise နဲ့တူချင်လား?
ဓာတ်ပုံတွေထဲကအရိပ်အမြွက်တွေ၊ အနားစောင်းတွေအနားစကတ်တွေကိုအမြဲတမ်းယူပြီးသင့်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအကြောင်းကိုသင့်ရဲ့ stylist ကိုပြောပြပါ။
ဆံပင်ပုံစံအမျိုးမျိုး၏ကွဲပြားခြားနားမှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ချုံ့ခြင်း၊ အသစ်ကြည့်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်တောင်းခံသည်ဖြစ်စေ၊ ဆံပင်မည်မျှဖယ်ရှားပစ်ရန်အရေးကြီးသည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုရှင်းပြရန်အရေးကြီးသည်။
အပေါ်နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှအနည်းငယ် = "ကျေးဇူးပြု၍ တူညီသောပုံစံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီး ၄-၈ ပတ်ကြာအောင်ပြန်ချုံ့ပါ"
ငါ့ကိုချုံ့ = "ပတ်ပတ်လည်အားလုံးစင်တီမီတာချွတ်"
ကျေးဇူးပြုပြီးညှပ်များကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်အားနှစ်ဖက်စလုံးတွင် ၃ ခုနှင့်ထိပ်ဆုံးမှ ၄ ခုကိုပေးပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးထိပ်နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှ ၁ လက်မ၊ ၂ လက်မလောက်ယူပါ
လူတိုင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်များရှိကြောင်းသတိရပါ။ သင်၏ဆံပင်အရောင်သာမကဘဲအထူ (ကြမ်း)၊ texture၊
သင်သည်ဆံပင်ညှပ်ကိုမေးသောအခါဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ချုံ့ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်သတိရသည်။ စိတ်မပူပါနဲ့သင်မှတ်မိဖို့လိုတဲ့ဆံပင်ညှပ်စကားလုံးများကမခက်ခဲပါ။
သင်သည်မည်သည့်အကြိမ်မည်မျှတောင်းလျှောက်ခဲ့ပါစေ၊ သင်သည်ကိန်းဂဏန်းအဓိပ္ပာယ်၏အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကိုမသိရှိခဲ့ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ဆံပင်ကိုသင်ပေးရန်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သောလက်တဆုပ်စာမျှသာရှိသည်ကိုသတိရပါ။
ဆံပင်အရှည်သည်တိုပြီးတဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်သွားသည်နှင့်အမျှ Taper သည်ညှိုးနွမ်းသောဆံပင်ပုံစံနှင့်ဆင်တူသည်။
ဘာဘာတစ် ဦး ဆံညှပ်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည် taper ဆံပင်ညှပ်အမျိုးအစားများမှာ:
သင်၏ဆံပင်ညှပ်မှသင်၏ဆံပင်ညှပ်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာသင်၏ဆံပင်ကိုသင်၏ ဦး ခေါင်းပတ်ပတ်လည်တွင်တူညီစွာထားရန်ဖြစ်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုရှောင်ရှားလိုပါကသင်၏ဆံပင်ကိုအသိပေးပါ။
၇။ သင်သည် clipper နံပါတ်စနစ်ကိုမှတ်မိရန်မလိုအပ်
Trimmer တစ်ခုပေါ်ရှိနံပါတ်ချိန်ညှိမှုများကိုသာလိုက်နာခြင်းသည်သင့်အားအကောင်းဆုံးဆံပင်ပုံစံရနိုင်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်လုံးဝမှားယွင်းနေသည်။
ကလစ်ညှပ်ခြင်းဆက်နွယ်မှုသည်ရည်ညွှန်းမှုအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သော်လည်းသင်ယခင်ကမလုပ်ဖူးသူတစ် ဦး အတွက်ဥပမာကောင်းမဟုတ်ပါ။
သတိရပါ၊ ဆံပင်တစ်ခုစီသည်ကွဲပြားခြားနားသောညှပ်အစု၊ ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုနှင့်ဆံပင်တိုတိုနှင့်ရှည်လျားသောအယူအဆကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆံပင်များသည်သင်္ချာဆိုင်ရာညီမျှခြင်းနှင့်လုံးဝမတူပါ။
တိုတောင်းသောအမျိုးသားဆံပင်ညှပ်ခြင်းဖြင့်လည်ပင်း (nape) သည်သင်၏ဆံပင်ပုံစံတွင်အရေးပါသည်။ လူအများစုကသိပ်မကြည့်ကြဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင့်ဆံပင်ညှပ်ရဲ့ဆံပင်ရဲ့အဆုံးမှာလည်ပင်းကိုပြဖို့သင့်ရဲ့ဆံပင်ကမှန်ကိုသုံးတယ်။
tapered လည်ပင်းအီး: သင်၏လည်ပင်းပေါ်ရှိဆံပင်၏အဆုံးသည်သဘာဝကျပြီးအမှေးမှိန်သွားသည်။ တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်သွားသောအခါသင်၏နားများနောက်ကျောပေါ်မှစတင်ပြီးသင်၏လည်ပင်း၌အိပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
rounded လည်ပင်း: သင်၏လည်ပင်းပေါ်တွင်သင်၏ဆံပင်၏အဆုံးအနားများဝိုင်းခဲ့သည်။
အမျိုးသားများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးလည်ပင်းမှာဝိုင်းပြီးကျဉ်းသောစတိုင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုသဘာဝကျသောကြောင့်၎င်းသည်အာရုံစူးစိုက်မှုသည်သင်၏အဓိကဆံပင်ပုံစံအပေါ်တွင်သာဖြစ်သည်။ သင်၏ဆံပင်ပုံစံကိုပိတ်ဆို့ထားသောလည်ပင်းနှင့်အဆုံးသတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။
သင်လိုအပ်သောဆံပင်အမျိုးအစားကိုစဉ်းစားပါ။ ယခုဆံပင်အမျိုးအစားကိုရရှိရန်သင်လုပ်လိုသောအရာကိုစဉ်းစားပါ။ ထုတ်ကုန်အမြောက်အများကိုသင်အသုံးပြုမလား။ သငျသညျနေ့စဉျအခြောက်မှုတ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား ဤရွေ့ကားသင်ပုံစံမတိုင်မီသင်သည်သင်၏ဆံအကြောင်းကြားရမယ်သောအလွန်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ကြသည်။ သတိရပါ, ဆံပင်ညှပ်ဆံပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒါဟာအပြည့်အဝအရာမဟုတ်ပါဘူး။
ဆံပင်ပုံစံ၊ မုတ်ဆိတ်ပုံစံနှင့်အခြားအရာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ website သို့ဝင်ရောက်ပါ။
၁၀။ ဆံပင်တွင်မည်သည့် texture မျိုးမဆိုလိုချင်သည်ဆိုသော်သင်၏ဆံပင်ကိုပြောပြပါ
ရိုးရာအမျိုးသားများ၏ဆံပင်ညှပ်ခြင်းများသည်အတော်လေးရိုးရှင်းပြီးအတော်အတန်တိုပြီးရိတ်သည်။ သင်သည်ပြီးပြီ။ ခေတ်သစ်ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တစ်ခုတွင်သင်၏ဆံပင်သည်သင့်ဆံပင်၌ texture ရှိခြင်းအကြောင်းကိုသင့်အားပြောလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ဆံတစ်စုံထွက်ယူပါလိမ့်မယ် ပါးလွှာသောဆံပင်ကတ်ကြေး နှင့်ဆံပင်၏အထူပါးလွှာထွက်။
သင်၏ဆံပင်မည်မျှထူသည်အပေါ် မူတည်၍ သင်၏ဆံပင်သည်လည်ပတ်မှုတိုင်းသို့မဟုတ်ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယအကြိမ်တိုင်းတွင်သင်၏ဆံပင်ကိုပါးလွှာစေနိုင်သည်။
အတူလူများအတွက် ဆံပင်ရှည်, အလွှာ texture ရှိခြင်းဆံပင်အလွှာအပိုင်းကွဲပြားခြားနားသောအရှည်ရှိသည်ဖို့ကိုဆိုလိုသည်။
သင်၏ဆံပင်သည်ဆံပင်ကိုညှပ်ရန်အတွက်ဖြောင့်သောသင်တုန်းသို့မဟုတ် texturizing သင်တုန်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဆံပင်ကောက်ကျစ်ခြင်းသည်ဆံပင်ကိုညှစ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
Choppy အလွှာဆံပင် texture
သင်သည်အသံအတိုးအကျယ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောပုံကိုရှာဖွေနေပါကဆံပင်ညှပ်သည့်ဆံပင်ပုံသဏ္usingာန်ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းသင်၏ဆံပင်ကိုပြောပြပါ။ Choppy အလွှာဖွဲ့စည်းထားသည့်ဆံပင်သည်အလယ်အလတ်မှရှည်လျားသောဆံပင်နှင့် ပို၍ ကောင်းမွန်သည်။
သင့်ရဲ့ဆံပင်ကသူတို့ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ပမ်းကိုယူပြီးအသုံးပြုလိမ့်မယ် အမှတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းပိုများသောအသံအတိုးအကျယ်နှင့် textured ဆံပင်ပုံစံများအတွက်အချို့သောကဏ္inများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရှည်စေရန် technique ကို။